Famintinana ny SPC Floor Formula - ZD manam-pahaizana zoro
Home > Famintinana ny SPC Floor Formula
Ahitsio: Denny　2020-06-05　Mobile
Lafatra vita amin'ny PVC
Vovoka resin-doko PVC, vovoka vato, plasticizer, stabilizer, karbonina mainty, ny tena singa dia polyvinyl chloride sy vovoka vato.
Ny gorodona plastika dia ahitana valizy vita amin'ny haingon-doko metatra PVC substrate, lamba misorosaka ary patelin'i drin UV mba hampivarina avy hatrany ambany.
Vato vita amin'ny plastika SPC
Vato plastika plastika vato SPC dia karazana fiarovana miaro ny tontolo iainana natsangana mifototra amin'ny teknolojia avo lenta.Ireo toetra mampiavaka ny zero formaldehyde, porofo mandrehitra, porofon'ny hamandoana, porofon'ny afo, porofo bibikely ary fametrahana tsotra.
Ny gorodona SPC dia extruder natambatra ho an'ny maty T-forme hamoahana ny substrate PVC, mampiasa calender telo-roller na efatra-roller mba hampisarahana ny takelaka vita amin'ny PVC, ny sarimihetsika miloko PVC ary ny substrate PVC, ny fandroana ary ny embossing amin'ny fotoana iray. , Tsotra ny dingana, vita ny hafanana, ary tsy ilaina lakaoly ny kla ilaina.
Ny fitaovana mavesatra SPC dia mampiasa pôlitika ho an'ny tontolo iainana ary tsy ahitana zavatra manimba toy ny metaly mavesatra, phthalates, ary metanol, ary manaraka ny fenitra EN14372, EN649-2011, IEC62321, ary GB4085-83. Tena be mpitia any amin'ireo firenena mandroso any Eropa sy Amerika ary ny tsenan'ny Azia-Pasifika. Miaraka amin'ny fahatokiany tsara sy mateza, ny gorodona vita amin'ny vato-plastika dia tsy mamaha ny olan'ny hamandoana sy manova ny gorodona matevina ihany, fa mamaha ihany koa ny olan'ny formaldehyde amin'ny fitaovana haingon-trano hafa.
Misy lamina maro azo isafidianana, mety amin'ny haingo anatiny, trano fandraisam-bahiny, hopitaly, toeram-pivarotana lehibe ary trano hafa ho an'ny daholobe
Ny fihenan'ny rihana SPC: ≤1 ‰ (taorian'ny fikarakarana fanentanana), ≤2.5 ‰ (alohan'ny fikarakarana fanentanana), (fitsapana ny fampihenana ny rano: 80 ℃, 6-standard standard);
Doka SPC: 1,9 ~ 2 taonina / cubic metatra;
Ny tombony SPC gorodona: Ny mari-pahaizana ara-batana SPC dia maharitra sy azo itokisana, ary ny mari-pahaizana simika dia manaraka ny fenitra iraisam-pirenena sy nasionaly;
Ny tsy fatiantoka amin'ny rihana SPC: ny gorodona SPC dia manana refy avo, lanja mavesatra ary lafo ny fitaterana ambony;
Raha ampitahaina amin'ny famokarana rihana LVT sy WPC, famokarana gorodona SPC: tsotra ny fanodinana ny famoronana rihana SPC ary ny dingana vita amin'ny famokarana.
Dingana famokarana rihana SPC
Fomba: 1. mifangaro
Fandrefesam-bidy arakaraka ny maripana ny akora «Fangaro mifangaro miaraka amin 'ny fifangaroanana hafainganam-pandeha (hafanana mifangaro hafanana: 125 ° C, ny fiasa dia ny fampifangaroana ireo fitaovana rehetra amin'ny fanamiana mba hamongorana ny hamandoana ao amin' ireo fitaovana). Afangaro mifangaro: 55 ° C.) → Mampifangaro fitaovana fanamiana amin'ny alàlan'ny hatsiaka;
Ny dingana 2: fanararaotana
Ampidiro ny extruder kambana mitarika ho an'ny fangatahana sy fanitarana → ampidiro ny lohan'ny maty ho an'ny fananganana fitrandrahana, ny takelaka noforonina hamaky ny kalandrie misy efa-efatra, ary ny fitaovana fototra dia apetraka ho matevina → sarimihetsika miloko → ravin-kofehy → mamontsina → manapaka
Ny dingana 3: fandefasana UV
Ranomaso UV → mihena
Ny fizotra 4: ny sling sy ny slotting + fonosana
Manelingelina → slotting, trimming, chamfering → inspeksyon → fonosana
Fakafakao ny olana iraisana-tsy fanamboarana ny vokatra tsy manjary
1. Tsy miova ny haben'ny vokatra, tsy feno ny bobongolo ary tsy mihetsika ny hatevin'ny rindrina.
Antony: Ny fanodinana anatiny sy ivelany tsy ara-dalàna ny pôlitika, ny hafainganam-pandehan'ny fanaka tsy miovaova, ny haingam-pandeha mahery vaika, ny fanamaintsainana henjana, ary ny fanadiovana tsy mety;
Vahaolana: hanatsarana ny salan'isan'ny mpandraharaha amin'ny atiny sy ivelany, ny tsy fahampian-tsakafo ahitsy, manolo ny barika sy ny skoty, ary amboary ny elanelana misy eo amin'ny barika sy ny sakana.
2. Tsy mitovy ny fisehoan'ny vokatra, ny fivoahana ny loko dia miharihary, ary ny mizana trondro tsy mihetsika dia hita eny ambony eny; miharatsy ny vokatra, mahantra ny harerahana, malemy ny vokatra ary mivaingana ny fanoherana ny fepetra;
Antony: Tsy mitombina ny firafitra raikitra, avo loatra ny famenoana tsy organika, mahantra ny plasticization ary tsy ampy ny habetsaky ny fiantraikany;
Vahaolana: amboary ny firafitra rajika, ahena ny votoatin'ny famenoana tsy organika, ahitsy ny fametahana ny plastika ho eo amin'ny 65%, ary ampio ny fitaovana miady amin'ny fiantraikany.
3. Ny famoahana ny vokatra vita dia esorina, tsy miova ary ampahany amin'ny fanampiana;
Antony: Ny lohan'ny milina sy ny maty dia tsy eo amin'ny fiaramanidina iray ihany, ny hafainganam-pandeha mihetsika be loatra, ny hafanana amin'ny rano mangatsiaka be loatra, ny haavon'ny rano mangatsiaka, ny tsy fahampian'ny rano, ny làlan'ny rano sy ny entona dia tsy malama, ary ny tsindry banga tsy ilaina dia tsy ampy;
Vahaolana: Mahitsy ny lohany ary ny fananganana maty amin'ny ambaratonga mitovy, ahena ny hafainganam-pandeha sy ny mari-pana mihena, ampitomboina ny tsindry amin'ny rano sy ny fikorianan-drivotra, amboary ny tsindry tsy mety ateraky ny banga mba hahitana ny lalan'ny rano sy ny làlan-drivotra. Fakafakao ny olana iraisana-tsy fanamboarana ny vokatra tsy manjary
Vahaolana: Mahitsy ny lohany ary ny fananganana maty amin'ny ambaratonga mitovy, ahena ny hafainganam-pandeha sy ny mari-pana mihena, ampitomboina ny tsindry amin'ny rano sy ny fikorianan-drivotra, amboary ny tsindry tsy mety ateraky ny banga mba hahitana ny lalan'ny rano sy ny làlan-drivotra.
Famintinana ny SPC Floor Formula Ny atiny mifandraika